Amawele aqokwe engalindele kumaSatma
IQ TWINS eqokwe kaningi kumaSatma, ithi ibisazibona kusamele iphelezele abanye abaculi emiklomelweni yezindondo njengoba iseyintsha emculweni Isithombe: INSTAGRAM
Thokozani Ndlovu | October 4, 2021
IQEMBU lomculo elibunjwe amawele akwaQwabe, iQ Twins lithi alikakakukholwa okwenzeka empilweni yalo emva kokuqokwa eminxeni eminingi kumaSouth African Traditional Music Awards (Satma) okuyinto ebelingayilindele.
IQ Twins iqokwe kwiBest Female Artist/Group, Best Traditional House Music Song nakwiBest Traditional Collaboration Song. Lithe lona belizitshela ukuthi liselisha emculweni kusamele lisebenze kanzima ukuze lifike esigabeni sokuqokwa ngalolu hlobo emincintiswaneni.
“ Thina besisazibona njengabantu abasazoba yingxenye yezihlwele ngokuthi sibe khona emicimbini njengabantu abazobukela abanye abaculi bewola izindondo. Sizibona sisenomsebenzi omningi osasihlalele ukuthi sifike esigabeni sokuthi siqokwe ngalolu hlobo.
Kusithusile kodwa kwasijabulisa futhi ukubona siqokwa ngalolu hlobo. Ikakhulukazi njengoba amaSatma kuyimiklomelo bonke abaculi abanesifiso sokuqokwa kuyona,” kusho uViggy noVirginia.
Bathe njengoba kusanda kumenyezelwa ukuthi baqokiwe, basazokhuluma nabahleli bale miklomelo ngezindlela abangazisebenzisa ukunxenxa abantu ukuthi babavotele.
Bathe abafuni ukuthi baphule imigomo yokunxenxa ukuvotelwa ngokwenza okungafanele ngoba abafuni ukuthi bazibeke engcupheni yokuthi bachithwe kule miklomelo lungakafiki usuku lwemiklomelo ngokungalandeli imithetho.
Leli qembu kungokwesibili liqokwa emiklomelweni yezindondo njengoba selike laqokwa kumaKZN Entertainment Awards nyakenye.
Ngaphandle kokuqokwa kumaSatma iQ Twins ithe imatasa nokuqopha i-EP yayo ezophuma ungakapheli unyaka.
AmaSatma azoba ngoNovemba 27 esifundazweni iMpumalanga.
Kuvotwa ngokuthi ubhale ukuthi: SATMA bese ufaka ikhodi yeciko olivotelayo, uthumele umqhafazo enombolweni ethi: 49495. Umqhafazo ubiza u-R1.50.